Olee Otú M Pụrụ Naghachi faịlụ site AcomData Draịvụ?
Weghachite Data si AcomData Draịvụ na 3 Nzọụkwụ
1 Olee Otú M Pụrụ Naghachi faịlụ site AcomData Draịvụ?
M na-eji a 500GB AcomData mpụga ike mbanye ugbu a. Nna m na-ezighị formatted ya dị nnọọ ugbu a. E nwere ọtụtụ ihe bara uru faịlụ na ya, nke m na-adịghị oge nyefee ha ka ha kọmputa m. Ugbu a, m nwere data mgbake nke. Biko gwa m otú naghachi faịlụ site na AcomData ike mbanye. Daalụ nke ukwuu!
Atụla kwa mwute. Mberede formatting bụ otu n'ime isi ihe mere nke data ọnwụ nke. Ebe a bụ eziokwu nke gị AcomData ike mbanye data ọnwụ: furu efu faịlụ ga-okụrede ruo mgbe ebighị ebi naanị mgbe ọhụrụ data na ya na-edochi ha. Ya mere, ị dị nnọọ mkpa iji kwụsị etinye ọhụrụ ọ bụla data gị AcomData ike mbanye na-ahụ a trustful AcomData ike mbanye data mgbake omume na-enyere gị aka.
A bụ m nkwanye: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. Ọ bụ a pụrụ iche e mere iji naghachi furu efu, ehichapụ, emerụ na formatted faịlụ site na gị AcomData ike mbanye. Na ya bara uru na n'ihe ize ndụ-free atụmatụ, ị ga-enwe ike naghachi fọrọ nke nta niile dị iche iche nke faịlụ na ụdị si gị AcomData ike mbanye, gụnyere oyiyi, akwụkwọ faịlụ, videos, ọdịyo faịlụ, Archive faịlụ, wdg
The Best Draịvụ Iweghachite Software
2 weghachite Data si AcomData Draịvụ na 3 Nzọụkwụ
Ka ịrụ mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows ugbu a. N'ihi na Mac ọrụ, ị nwekwara ike na-eso ndu na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite AcomData ike mbanye data mgbake
Mgbe na-agba ọsọ mmekọ na kọmputa gị, ị ga-esi 3 mgbake ụdịdị: "Echefuola File Iweghachite", "nkebi Iweghachite", na "Raw File Iweghachite".
Ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Cheta na: Biko mee n'aka na gị AcomData ike mbanye nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị AcomData ike mbanye
Ugbu a gị na mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị AcomData ike mbanye na mmemme window na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu maka furu efu faịlụ na ya.
Naghachi data si a formatted AcomData ike mbanye, biko arụsi ọrụ ike "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na AcomData ike mbanye
Na njedebe, niile hụrụ faịlụ gị AcomData ike mbanye ga-egosipụta na window. Na ị dị nnọọ mkpa iji họrọ ndị faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị na-natara faịlụ azụ gị AcomData ike mbanye.
Olee otú ndabere na weghachite Blackberry SMS
Photo Recovery Maka Mavericks: Naghachi ehichapụ Photos na Mac Mavericks
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi AcomData Draịvụ Data Recovery